နိဒါန်းအခမဲ့ဓာတ်ပုံ - ဗီဒီယိုချက်တင်-အချစ်အွန်လိုင်း!
ပါး ၃၀၀ ထောင်စု၏မြို့တော်အတွက်အီရတ်မြို့များ၏စာလုံးပေါင်း။ ကံမကောင်းစွာ၊ပင်ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားတဲ့မြို့တော်အဖြစ် belkhatov၊ရှာဖွေရန်တစ်ခါတစ်ရံခက်ခဲသည်ကိုသင်၏အခြားတစ်ဝက်။ သဘာဝရှက်ကြောက်၏ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားတိမ်းအချို့တွင်ချိန်းတွေ့၊စစ်မှန်သောဘဝ၌။ ရချင်တယ်ဆိုရင်ကျွမ်းအတွက်စာလုံးပေါင်းနှင့်အတူတစ်ဦးသည်လူသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးထံမှသင့်ရဲ့စီးတီး၊တော့ Belkhatov ချိန်းတွေ့ဆိုက် TRULOLO ကမ်းလှမ်း၊သင်ကအခုအချိန်မှာထိုသို့ပြု။ ဒီလုံးဝအခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု၊ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ကြတယ်ပူဇော်ဖို့သင်ဖို့အခွင့်အလွယ်တကူနဲ့လျင်မြန်စွာအထိလူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်မှသင်၏မြို့။ သင်ချင်တယ်ရှိမရှိတည်ဆောက်ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊မိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေ၊သို့မဟုတ်ပဲရှိစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားပြော၊ကျနော်တို့ပူးပေါင်းဖို့သင်ဖိတ်ခေါ်ပါ။ ယနေ့လူများစွာရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ချိန်းတွေ့အတွက်စာလုံးပေါင်းဘဲ။ အပေါ် တကယ်တော့အဖြစ်၊စာရင်းဇယားပြပွဲအမည္မေပေးသည်ဘယ်တော့မှကောင်းသောရလဒ်များကိုအတွင်းအစည်းအဝေး၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အကြံပြုကြောင်းသင်ဖြုန်းနေကြတယ်ရုံမိနစ်အနည်းငယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချိန်ကာလအဆာထွက်အမးခြန္းသောနောက်၊အားလုံးအရွယ်ရောက်ချိန်းတွေ့အတွက်စာလုံးပေါင်းရန်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်သင်အပြည့်အဝ။ ကျွန်မယုံကြည်သောငါတို့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကသင့်ကိုကူညီလိမ့်မယ်ရှာကုန်ကျွမ်းတည်ရှိနေပါလိမ့်မယ်သင့်ရဲ့မှတ်ဉာဏ်အတွက်အသက်တာ၏ကြွင်းသောအရာ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအလိုအကံကောင်းခြင်း၏အကောင်းဆုံး။
ချင်ပါတယ်သင်မေးဖို့များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်လိမ့်မည်၊သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လူတစ်ဦးနှင့်စေသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်။ ကျွန်တော်လည်းပြောပါကျွန်တော်တို့အတူအဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသမီးများ၏Volhynia။ အခမဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက်ဒေသအားလုံးဒီကနေမြင်နိုင်၏အမျိုးသမီးတစ်ဦး။ ဆိုက်မှတ်ပုံတင်နှင့်အပေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အပြန်အလှန်နှင့်အတူအမျိုးသမီးနှင့်မိန်းကလေးများအတွက်လူနေမှု Volyn ဒေသနှင့်အခြားဒေသများ။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တွေ့ဆုံရန်မေတ္တာ၌လဲကျ၊နှင့်အသစ်အသိအကျွမ်းများ၊မိတ်ဆွေများနှင့်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်၊ယခုကိုခံစားချိန်းတွေ့ဆိုက်။
က်ားခံ Vladivostok အဘို့အချိန်းတွေ့၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမပါဘဲ၊ဖုန္း Vladivostokေနာက္ကြယ္ကချိန်းတွေ့၊ၾကာ္ျငာမ်ား
အမ်ိဳးသမီးပြဲ Vladivostok အဘို့အချိန်းတွေ့၊အသုံးပြုမှုဆိုက်
ပင်သင်ကြိုက်လျှင်လှပသောအမျိုးသမီး၊သင်ငြင်းကြောက်လန့်ဖြစ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်တစ်နေရာပြောင်းလဲပုံမှန်အခါသင်အများပြည်သူအရပ်ဌာန၌။ အရာအားလုံးကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်ပါလိမ့်မယ်နဲ့တူကိုမှန်ကန်မိန်းကလေး။ ထိုဘေးထွက်ဆိုးပြည့်စုံ၏ကတိတော်များကိုကတိကဝတ်၊ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုနှစ်ဦးစလုံး၊အစည်းအဝေးအဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အနေဖြင့်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းအရာတစ်ခုကို၊ဒါကြောင့်သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အဘို့အမြော်လင့်လျက်။ ထိုဆိုက်မျက်နှာအားဖြင့်ရက်ရက်ရောရောအထီးပွန်သူပြောတက်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့သယံဇာတအရင်းအ pinboard"အမျိုးသမီးဝေစုအကျိုးအမြတ်"၏ဓာတ်ပုံဆရာကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ Yonehan။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင့်။ လမ်းဖြင့်၊သင်သေချာပါစေတစ်ဦးမြင်နိုင်၏။ ပေးပို့ဖို့၊သင်လိုအပ်ဖန်တီးလဲလှယ်ရေအတွက်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်။ အများအပြားရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ပထမအပါးသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်သောဆက်ဆံရေးအတွက်။ ယခု၊မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုအတွက်ပြန်လည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ဒါ့အပြင်၊တစ်ခါတစ်ရံတွင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အချိန်နှင့်ဆက်ဆံရေးဝမ်းကြောင်းကိုသင်ဆန္ဒရှိနိုင်ခရီးသွားပိုအပေါင်းတို့သည်အချိန်။ လည်းရှိပါတယ်၊တစ်အရေလိုသူများသောမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့ဆုံရန်မိမိတို့ဇနီးများအတွက်အကြောင်းပြချက်။ သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူး?" ဒီဆိုက်ကအရမ်းအဆင်ပြေပြေနဲ့အကျွမ်းတဝင်:ပရိုဖိုင်ကိုဖန်တီး၊မိန်းကလေးမကြိုက်ကြပါဘူး၊မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ချိန်းဖုန်းနံပါတ်ဝယ်ထားသည်။ အချိန်ကိုကယ်တင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်အငြိမသိဘဲ။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊အွန်လိုင်းရွေးချယ်မှုသည်အနာဂတ်အတွက်လမ်းအပေါ်စကားပြောခန်း။ ပြီးနောက်-လက်ရှိစာမျက်နှာ၏ကိုယ်ရေးစာမျက်နှာအားအတည်ပြုခြင်းနှင့်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကို။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြော်ငြာရန်လိင်ချိန်းတွေ့၊တစ်ဦးမေးလ်ပို့နိုင်သော listquot;-ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် မင္ကြင္းအားလုံးစိတ်ဝင်စားမိန်းကလေးများအတွက် Vladivostok။ သူတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားကြသူအတွက်စစ်မှန်သော-အချိန်အစည်းအဝေး၊ကြွင်းသောအရာစိတ်ချပါကျွန်တော်တို့ယူလိမ့်မည်အကျိုးစီးပွားအကောင့်သို့ခြင်းနှင့်ထို့ကြောင့်နှင့်အတူတိုင်ပင်။
လိမ္ျလိုအပ်သည်များအတွက်အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကဤဆိုဒ်၏။ အပေါ်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိမ္ျ၏ကူျ၊သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မယ် နှင့်အတူဝင္သည္ကယ္ေသာလိုလက်ခံဖို့အလိုအလျောက်-လက္ခံကတည်းက၊သင်ရုတ်တရက်တွေ့အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဲနှောင်အတူ မှချည်နှောင်ကြောင့်ယခုအချိန်တွင်။ အမှုပင်သော်လည်းတကယ်ချင်ပါဘူး၊သူပြပွဲအကျွမ်းသူတို့အကြား။ ကသိပ္သေအစားအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှုတ်ခွန်းဆက်အသယ်ဆောင်နှင့်အတူ။
အာရပ်မိန်းကလေးများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ချိန်းတွေ့တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်။ ငါခန့်မှန်းရန်ရှိသည်မယ်လို့အလွန်ရိုသေလေးစားမှုအကြောင်း။ ဒါဟာအပေါ်မူတည်ရပ်မိန်းကလေးရဲ့နောက်ခံအရောင်၊အသက်ရှင်ခြင်းနှင့် ပညာေရး။ ရန်ခက်ခဲသည်ငှာ။ သငျသညျရိုးရိုးမအခြေစိုက်စခန်း၏အဖြေများကိုအပေါ်အစွန်းရောက်။ ငါခန့်မှန်းရန်ရှိသည်မယ်လို့အလွန်ရိုသေလေးစားကြောင်းသူတို့၏ယုံကြည်ချက်ရှိစေခြင်းငှါပြောဖို့သူမ၏မိဘများအခွင့်ပြုချက်အဘို့အ၊မသိသောဤဆက်ဆံရေးသို့လှည့်လိမ့်မည်အလွန်အလေးအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ခံအရောင်၊ကြီးပြင်း။။ ရန်ခက်ခဲသည်ငှာ။ သငျသညျရိုးရိုးမအခြေစိုက်စခန်း၏အဖြေပေါ်ယဉ်ကျေးမှုဓပေးအစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာ။ ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုဘယ်လို။ ငါနှစ်ဆယ်ခုနစ်နှစ်အရွယ်ပါ၊အကြောက်ပင်မိန်းကလေးများပြောပြရန်အဆင်ရန်။ ငါကဘယ်လိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်? (ဒါဟာငါဆောင်ခဲ့ကြပြီတက်လိုကြောင်းတူညီသောလမ်းအတွက်၊ဒါကြောင့်အချည်းအမည်'စေ'သို့မဟုတ်လဲ'ဒီလူရဲ့စိတ်ကိုခန့်မေတ္တာ။ ကတည်းကသိတယ်ဒါပေမယ့်။ သူမချစ်တော်မူ၏မီဒီယာသိ။ သူမသည်သူငယ်ချင်းများအဘို့မီဒီယာဆိုလိုသူမသည်ကိုယ့်အကြောက်ဖော်ပြသူမဖြည့်စွက်သည်အမှန်တကယ်အပြစ်မဲ့သိတဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူအဘယ်သူကိုငါလဲမေတ္တာ၌ဟုန်းဟုန်းနှင့်အတူ။ သူသည်ငါ့အတန်းအစား၊ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဘူးပြောတာ။ ကျွန်တော်အရမ်းရှက်၏မိန်းကလေးများနှင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး ဤရှစ်စာစကားလုံးယောက်ျားလေးများမိန်းကလေးများကချစ်အသုံးပြုမိဘမိန်းကလေးများမုန်းသုံးယောက်ျားလေးများမေတ္တာကြောင့်မိဘများကအဖြေမိန်းကလေးများအသုံးပြုယောက်ျားလေးများအတူ ။ ငါခစျြမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊ကျွန်တော်မသိဘူးသူမအခြားထက်သူမ၏အမည်၊မည်သို့သူမ၏သူမတူမေတ္တာ၌လဲကျ။ ငါမပြောနှင့်အတူသူမ၏တစ်ချိန်ကပစ္ပါ။ သူမမကြည့်ရှုဖို့အမေရိကန်မှတဆင့်တို့သည်မျက်နှာတို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဦးသင့်စိတ်ဝင်စားဖို့အားဖြင့်သူမ၏ဂရုစိုက်ကြောင်းသူမနှင့်အဘယ်အရာကိုမြင်သူဘယ်လိုမှတေးသွားကိုအရပ်-။ မော်ဒယ်သည်အာရပ်-။ ငါမွငျနိုငျသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်လမ်းကြောင်းပြောင်းလဲပေမယ့်အလုိင္းမရလူဦးရေနှင့်မျှမရှိအသံ။ ဒါပေမယ့်သင်ရမယ်ကိစ္စကိုဆွေးနွေး။ စေသည့်အရာမှဆုံးဖြတ်ရန်သင်ကြားသူမဟုတ်ဘဲဖြစ်နှင့်အတူ။ မည်သို့ပင်သူမ၏ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်၊တက်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်းနှင့်လက်ခံ။ ဟုတ်တယ်၊ငါနှင့်အတူပြဿနာများရှိသည်သော။ ငါ့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ကိုသင်ဖို့ကြိုးစားနေသည်လုပ်စကား၊သို့မဟုတ်ခရီးအနီးသူမ၏သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို။ ထိုလမ်းသည်စကားလက်ဆုံစတင်ခဲ့။ သင်လည်းပြီးသင်ပြုလိုအပ်သမျှအခေါ်မှသူမအဘယ်မှာသင်ပြီးတော့သင် သင်သည်အဘယ်သို့ နှစ်ဦးစလုံးရှိသည်ဟုဆိုသည်။ မင်္ဂလာပါ။ သူမစေခြင်းငှါရင္သီးအနည်းငယ်ကြောင့်သူမ၏ဖခင်၏။ ကြိုးစားပြောပြရန်သူမ၏ပုဂ္ဂလိကအတွက်ပြီးလျှင်တူညီသောလမ်းခံစားရခံစားရသည်။ နှစ်၊နှစ်နှစ်တုန်းကကျွန်မချစ်တဲ့မိန်းကလေး။ သူမပိုင်မှတစ်ဦးရှေးရိုးစွဲမိသားစု။ ကနေနောက်ဆုံးခြောက်လအတွင်းသူမလက်ခံရရှိသည်ချဉ်းကပ်ချစ်ကြောင်းမှသူမ၏အများအပြားငါ၏။ ငါဒီအပတ်ပတ်လည်သောသူမိန်းကလေးတစ်ငါတွေ့ဆုံခဲ့ဘယ်တော့မှ။ ဒါပေမယ့်သူမကရယ်နေမှာအများကြီးအမှုအရာအကြောင်းပြောနေတာ၊နှင့်သူမထိမိ၊ငါ့လက်မောင်းကိုအကြိမ်အနည်းငယ်။ သူမဖို့ကြိုးစားနေပြသောသူမကိုကြိုက်ၽြန္ုပ္၏သို့မဟုတ်ရုံအတန္ခ်ိန္အအမျိုးအစား? ချင်မှနိုင်မိန်းကလေးများပြောပြရန်အကြောင်းအရအတွက်စိတ်ဝင်စားဘို့အကြှနျုပျကိုအခမဲ့၊ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာဒါဟာအလိုအကြှနျုပျကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိပါတယ်၊တစ်ဖို့ကြိုးစားနေတစ်စုံတစ်ယောက်။ သူတော်များနှင့်အတူရယ်မောနှင့်အခြားမိန်းကလေးများမူကားလှည့်သူ၏မျက်နှာအခါငါဝင်ခန်းဒါပေမယ့်ငါ့အားပြောပြရန်အလွတ်လပ်လပ်မိုဘိုင်းအပေါ်ယခုများအတွက်နောက်ဆုံးလေးရက်၊သူပို့ငါ့ကိုအဘယ်သူမျှမ၊ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားကြဘူးသူမကမကြိုက်သောကြောင့်၊သူသည်ဘယ်တော့မှကျွန်တော့ကိုကြည့်၊သူမကပြောငါ့ကိုအဖို့တစ်ခါသာ၊သူသည်ဖြစ်နိုင်မနိုင်ပင် ။ ငါသည်ဤရှိခဲ့ပါတယ်အချစ်အပေါ်ဒီအာရပ်၊မိန်းကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်သူမကြိုက်သူမအမြဲဖို့အသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်မရဲ့လက်လိုကစားကိုစစ်တိုက်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်ငါအရမ်းကြောက်ဖို့သူမ၏ထွက်မေးပေမယ့်။ ငါသည်ဤရှိခဲ့ပါတယ်အချစ်အပေါ်ဒီအာရပ်၊မိန်းကလေးတစ်ဦးကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်သူမကြိုက်သူမအမြဲဖို့အသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်မရဲ့လက်လိုကစားကိုစစ်တိုက်ခြင်း၊ဒါပေမယ့်ငါတော့ကြောက်သူမ၏ထွက်မေးရန်အခါဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့ခဲ့ဘောလုံးထိုသို့ပြုမှ၊သူမကငါ့ကိုအသင်တို့နှင့်အတူတကယ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကဲ့သို့ဒါပေမယ့်မကြိုက်ကြောင်းမိတ်ဆွေတစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးကခဲ့ ၊ဒါပေမယ့်သည်အဘယ်ကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည်ဤအရပ်မလေးငါ့ကိုကြိုက်ဖို့အသုံးပြုကစားတိုက်ပွဲနှင့်သူမသည်အစဉ်အမြဲအသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ရန်ငါ့လက်နဲ့ငါတော့ကြောက်သူမ၏ထွက်မေးရန်အခါဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့ရစ္က။ ငါတူခံစားခဲ့ရဤအရပ်မလေးငါ့ကိုကြိုက်ဖို့အသုံးပြုကစားတိုက်ပွဲနှင့်သူမသည်အစဉ်အမြဲအသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ရန်ငါ့လက်နဲ့ငါတော့ကြောက်သူမ၏ထွက်မေးရန်အခါဒါပေမယ့်ငါနောက်ဆုံးတော့ခဲ့၊သူမကငါ့ကိုအနှင့်အတူတကယ်ပါ။ ငါသည်သင်တို့ကဲ့သို့ဒါပေမယ့်မကြိုက်ကြောင်းခန့်မှန်းသောအရပ်ကဲ့သို့ယနေ့အတွက်ယောက်ျားတွေသူမ၏ကိုယ်ပိုင်လိဂ်ကြိုက်တယ်ဤအရပ်မိန်းကလေးတစ်သူမသည်အစဉ်အမြဲဖို့အသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်မရဲ့လက်နဲ့ကျနော်တို့ကကစားရန်အသုံးပြုသည်၊ဒါပေမယ့်ငါတော့ကြောက်သူမ၏ထွက်မေးရန် နှင့်တဲ့အခါ၊သူမငါ့ကိုဝင်တိုက်။ ငါကြိုက်တယ်ဤအရပ်မိန်းကလေးတစ်သူမသည်အစဉ်အမြဲဖို့အသုံးပြုလိုက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်မရဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုကစားရန်တိုက်ဒါပေမယ့်ငါတော့ကြောက်သူမ၏ထွက်မေးရန်အခါကိုယ့်ကိုပြုသူသည်ငါ့ကိုအနှင့်အတူငါသည်သင်တို့ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲတူနေဆဲမှီတိုင်အောင်ဒီနေ့ကျနော်တို့ဆဲ၏မိတ်ဆွေများနှင့်အဆဲအကိုင်ငါ့လက်တောင်မှသူမမကြိုက်ပါဘူးအဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုငါဆက်ပြီးမက်များအကြောင်းငါ့ရည်းစားဟောင်းဖြစ်စေ၊ကျနော်တို့အတူတူပြန်ရ၊သူမတူမေတ္တာ၌ကျရောက်ငါ့ကိုမနောက်တဖန်အ၊သူမကွယ်လွန်၊ ငါတက်ရိုက်နှက်မိန်းကလေးတစ်သူမသည်ငါ့အပေါ်မှာလိမ်လည်လှည့်။ ကျနော်တို့လိုအပ်၏အကူအညီ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းအရာအားဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်းမေးခွန်းများဖြစ်ကြောင်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အတူတူနှင့်ပေါင်းစပ်သူတို့ကိုဤသို့မေးခွန်း။ ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးပါသောမေးခွန်းများကိုအောက်တွင်အဖြစ်အတူတူဒီကနေနှစ်၊နှစ်နှစ်တုန်းကကျွန်မချစ်တဲ့မိန်းကလေး။ သူမပိုင်မှတစ်ဦးရှေးရိုးစွဲမိသားစု။ ကနေနောက်ဆုံးခြောက်လအတွင်းသူမလက်ခံရရှိသည်ချဉ်းကပ်ချစ်ကြောင်းမှသူမ၏အများအပြားငါ၏။ ကျွန်မခင်ပွန်းကိုချစ်နောက်ထပ်မိန်းကလေး၊ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်လွန်းငါရချင်မှသူ့ကိုနောက်ကျောငါ့ကိုငါဘယ်လိုဒီလိုလုပ်ပြီး၊ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ အောက်ပါမေးခွန်းများကိုခဲ့ကြစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ ဒီတစ်ခု။ သင်ခံစားရလျှင်သင်မည်သည့်ဤမေးခွန်းများကို၏ထားသည်အမှားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုးတက်ကောင်းမွန်ကြောင်းအရာအားဖြင့်ခွဲဤမေးခွန်းများကိုသို့သီးခြားဆွေးနွေးမှုများ။ ယခု မည်သည့်မေးခွန်းများကဲ့သို့တူညီသောမဟာဒီဒံယေလသည်စကားပြောညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့်အတူကျွန်မကိုမေးမြန်။ ဒံယေပွဲများ၏တောင်းဆိုချက်နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်း၏အွန်လိုင်း။ ဒံယေအောင်မြင်ထားပါတယ်'ရွှေ'အဆင့်အတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခြုံငုံအမွတ္ေ။ ဒံယေလအပြုသဘောတုံ့ပြန်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၏။
လောလောဆယ်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအစည်းအဝေးအ Polova တြင္ Liaoning ကိုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ကြည့်ရန်ဓါတ်ပုံများနှင့်မည္။ အသစ်အကျွမ်းကမ်းလှမ်းဖို့နည်းလမ်းအသစ်တစ်ခု၏အဖွဲ့ဝင်ဆိုက်၏ဤဖုန်းနံပါတ်၊ကျေးဇူးတင်ဖို့အကောင်းဆုံးနှင့်အရေးအရင်းအမြစ်များ။ Polovinka ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့၊ဓါတ်ပုံမပါဘဲ၊ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးအရာဝတ္ထုမဟုတ်နိုင်နှင့်တွေ့ဆုံ။ Polovinka ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်ဓာတ်ပုံများ၊ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးအိမ္ျနိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်၊မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခမဲ့။ Polovnka ဆိုက် ၁၀၀ အခမဲ့(မွတ္ပံု)၊ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်ဆိုက်၊နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်သင်တန်းသားများအနေဖြင့်အသိုက်အဝန်းအသိအကျွမ်း။ ယနေ့သင်သုံးနိုင်သည်"အကြိုက်ဆုံး"-ဤသည်၏ဖုန်းနံပါတ်မိန်းကလေးနဲ့ကောင်လေးအတွက်ဓာတ်ပုံခဲ့သောလည်းမည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ။
ကမ်ချက်တင်ရပ်၌သင်တို့ကိုထည့်လေ့မရှိနှင့်အတူထိတွေ့သူအခြားလူများပြောဆိုအာသို့မဟုတ်အ ။ သင်ချိန်းတွေ့သို့မဟုတ်ရင်းနှီးဖော်ရွေအကြားဆက်ဆံရေး နှင့် ၊အဘယ်သူသိတယ်၊သင်ပင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတွေ့ရှိသူလက်ထပ်။ ကျွန်တော်တို့၏အိပ်မက်မက်အားလုံးချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာဆောင်နှင့်အတူမေတ္တာ၌လဲကျ၊ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မည်။ အတူကမ်၊အရာအားလုံးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်ရိုးရှင်းသောဒါပေမယ့်လည်းအပေါင်းတို့နှင့်အထက်အများကြီးပိုပြီးပြင်းထန်။ စကားပြောရပ်ကမ်နှင့်အသက်ဝင်စေနိုင်တယ်ရန်နိုင်မည်နိုင်ရန်အတွက်ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်အသစ်တွေ့ဆုံရန်လူတစ်ဦးအတွက်ဝမ်းမြောက်ဒါပေမယ့်လည်းမှာအလေးစား။ အာရပ်အသိုင်းအဝိုင်း၏ငါ့အားပြောပြရန်အသင့်လျင်မြန်စွာဖြားသင်တို့ရွှင်လန်းသောအစည်းအဝေးမှာအားလုံး။
။ မြန်မာနိုင်ငံ၏အရပ်:ကမ္ဘာ့ယဉ်ကျေးမှုစင်တာ၊တစ်မိတ်ဖက်ပြင်သစ်၊အာရပ်နိုင်ငံတစ်ခုချင်းစီသည်ညဦးယံမှာကိုး၊အာရဗစ္ဘာသာစကားတြန္းအက္ခရာများအတွက်အလင်း၏အ ဖန်များ၏မျက်နှာစာ၏အခ်ဳပ္လိုက္ရေ၊ထိစပ်၊ဒီဇင္ဘာလအခါသမယတွင်ပွဲ၏အရဗ်ဘာသာစကား။ တွေ့အစီအစဉ်များ၏ပွဲတော်အာရဗီဘာသာစကား: မှယူ၏စစ်မှန်သောသောဇာတ်လမ်းတလူငယ် ၊"အဆိုတော်များရတ္၊"၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြမည်သို့လူငယ်တစ်ဦးသည်လူတစ်ဦးကနေကာင့္သူမ၏ကံကြမ္မာအတွက်လက်အောင်မြင်ရန်မိမိအအကြီးမားဆုံးအိပ်မက်သီချင်းလိင်၊စစ်ရေး:ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာ၊အသုံးသောဆုံမှတ်ဖြတ်သန်းနှင့်ချယ်လှယ်သောအနှံ့ခြောက်ခုရာစုနှစ်၏အလေ့အကျင့်နှင့်။ အလေးအဇင်ဘာလ၊ပူးပေါင်းအတွက်အထိမ်းအမှတ်အာရဗီဘာသာစကားမှာအခ်ဳပ္လိုက္ရေသးတယ္။ လာနှင့်အသက်ရှင်ခိုက်ဝေမျှနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားဖြင့်၊အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊အကြန္ယက္-မှတ်တမ်းကဆိုသည်အာရဗစ္၊အကျယ်ဟုတ်ပါတယ်၊ကခုန်၊၊ရုပ်ရှင်ရုံ၊အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ပန္လည္ထူေ၏က်ဲဟ္လြန္မ္အ ။ ရှာဖွေမ္း၏ေတး၏အခ်ဳပ္လိုက္ရေအ é နိုဝင်ဘာလအပေါ်အသံတိမ်အခ်ဳပ္လိုက္ရေသးတယ္။ ဒါဟာခရစ္စမတ်။ စာအုပ်တစ်အုပ်-ပြဇာတ်ရုံမှပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်း၏ပုံပြင်များ။ ကမ်းလှမ်းခရစ္စမတ်:-ငါးအ ခဲ့တဲ့အသုံးအဇင်ဘာလ:ညခြွင်းချက်ပြဲမြို့ထောင်။ သွင်ခရီး ၊မြောက်ပိုင်း၏မြို့တော်တြန္း၊ ကြာသပတေးနေ့နှစ်ခုနစ် é သုံး ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဖြစ်အပျက်အတွက်၊ပဲရစ်အခ်ဳပ္လိုက္ရေလိမ့်မည်အတော်လေးပိတ်အပေါ်စနေနေ့၊ရှစ်ဇင်ဘာလ။ ကျေးဇူးပြုပြီးဆင်ခြေဆင်လက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်မပြေ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှုပ်ရှားမှု၏လူမှုစနေ၊ရှစ်ဇင္ဘာလ၊ဒီအစည်းအဝေး၏ဇာတ်လမ်းစာအုပ်လက်မှတ်ထိုးသည်ဆိုင်းဖို့အကြာတွင်နေ့စွဲ။ သင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ကြောင့်လှုပ်ရှားမှု၏အနေ၊ရှစ်ဇင္ဘာလ၊ဒီအစည်းအဝေး၏ဇာတ်လမ်းစာအုပ်လက်မှတ်ထိုးသည်ဆိုင်းဖို့အကြာတွင်နေ့စွဲ။ သင့်ရဲ့နားလည်မှုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်ဖြစ်တည်ဆောက်အညီအမ၊ သည်ဟူသောကြီး"ဟုခေါ်သည်ရောမမြို့၏အာဖရိကအားဖြင့်"အမေတြကဆုိပါတယ္။ သွားအတွေ့အမင်းအမွေခြိမ်းခြောက်သောထောင်။ သွင်ခရီး ၊အ၊၏အခါသမယအပေါ်စာအုပ်ကိုလူတိုင်းကိုယ့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ၊များမှဂျွန် နှင့်အလှမယ် ü ခန့်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးစိတ်ကူးယဉ်မှုတ်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ပရောဖက်၏ကြိုဆိုလိမ့်မည်ဟုစာရေးသူ ၊စနေနေ့ ရှစ်ဇင်ဘာလအတွက်စာဖတ်ခြင်းသူမ၏စာအုပ်အကဲ၏ခရီးအကြောင်ကာတြန္းရှာဖွေတွေ့ရှိကြွယ်ဝသောအမွေအားဖြင့်မျှဝေအယဉ်ကျေးမှု၏ဂျူးနှင့်မြတ္စအားဖြင့်တစ်ဦးလက်ဝါးကပ်တိုင်၏ပါဝင်သည်ဟုနှစ်ဦးလည်ပတ်ဖို့နှစ်ဦးအသံ၊အတူပူးပေါင်း။
များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင့်ရဲ့ခရီးကွေ့-။ ကျနော်တို့အနေနဲ့အွန်လိုင်းအသိုင်းအဓိကရည်ရွယ်ေဆာ္ဒီရှာကြသည်သောသူအဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောဆက်ဆံရေး။ ကျွန်ုပ်တို့ဝင်လာမှပြင်သစ်၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ကနေဒါ၊ကွေ့နှင့်ကမ္ဘာအနှံ့။ ဒါပေမယ့် သူတို့အားလုံးတူညီရာတစျခုရှိ:အလိုဆန္ဒများကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်အခြားသူများနှင့်အတူမျှဝေရန်၎င်းတို့၏တန်ဖိုးများဆာ္ဒီနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးစီးပွား။ ကျနော်တို့ပထမဦးဆုံးလူမှုကွန်ရက်ပါဝင်သောရှာဖွေနေငယ်ရွယ်ပြီးအသက်နှင့်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ရိုးရှင်းခြင်း၊ထိရောက်သောနှင့်အခမဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်သူတို့ကိုကူညီရန်အဘယ်အရာကိုရှာတွေ့ဖို့လိုအပ်။ ထို့အပြင်အတွက်၊ပေးပို့မျှဝေရုပ်ပုံများအပေါ်ပင်လယ်ကွေ့-ချိန်းတွေ့၊အဖွဲ့ဝင်များလည်းမျှဝေဗီဒီယိုများ၊ဘလော့ဂ်များ၊နှင့်ဂီတနှင့်အတူအခြားအသုံးပြုသူများ။ ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုအလုပ်ရှာဘို့မေတ္တာနှင့်အပျော်အပါး။ အခါသင်အရည်အမာမ္အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးဆိုက်ပေါ်တွင်၊သင်ရလိမ့်မယ်၊အသေးစိတ်အမြင်သို့သူတို့ရဲ့နောက်ခံအရောင်၊ပုံစံ၊အသွင်အပြင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့အဘို့အကြည့်အတွက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ်အဖော်။ ကျွန်တော်ယုံကြည်ကြောင်းပိုသိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအကြောင်းကိုခြင်း၊ပိုမိုလွယ်ကူကအသီးကိုရှာသည်၊သင်၏အဆွေခင်ပွန်းနှင့်သို့မဟုတ်စစ်မှန်သောအချစ်။ ကွေ့-ချိန်းတွေ့ခြင်းသည်အလုံခြုံအဆင်ပြေရာပတ်ဝန်းကျင်ပီးဆော်ဒီအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားများ။ သုံးစွဲဖို့အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာများဆိုက်သင်ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ရန်ရန်လိုအပ်သည်။ အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဒါဟာင့်၊နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်သာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ။ ငျြးမှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်နှင့်အဆက်အသွယ်အဖွဲ့ဝင်များအခမဲ့ဆိုက်သင်နှင့်အနီးဆုံး၊သို့မဟုတ်အသုံးပြုခြင်းအခမဲ့စကားပြောခန်း၊ဒါကြောင့်တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့မှတ်ပုံတင်ရန်။ ဒါေၾကာင့္ကွေ့-ချိန်းတွေ့:မင်္ဂလာပါကိုကွေ့ဆိုက်ကိုပိုကောင်းများအတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်ထောင်ရေးသည်လုံးဝတာဝန်ခံအခမဲ့နှင့်ဆိုက်ဆင္ေကွေ့-ချိန်းတွေ့အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့ဘို့နှင့်မင်္ဂလာဆောင်အတွက်အကွေ့(ကူဝိတ်၊ဘာရိန်း၊အီရတ်၊အိုမန်၊ကာတာနိုင်ငံ၊ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အာရပ်စော်ဘွား)နှင့်အားလုံးအာရပ်နိုင်ငံများသို့ခေါ်ဆိုခမိန်းကလေးများတင့်တယ်ခြင်းနှင့်လူငယ်ျလူသိများ နှင့်အထူးဧည့်ခံ။ ဤဆိုက်သည်အထူးသဖြင့်ဆက်ကပ်အပ်နှံဖို့ခက်တဲ့အလုပ်နှင့်ကြာမြင့်စွာစကားပြောကြားအမျိုးမျိုးသောကွေ့နှင့်မြို့ကဲ့သို့သောအဖြစ်လာမ္အေျ၊၊၊အိုမန်၊ကူဝိတ်၊ဒူဘိုင်း၊၊ဒိုႏ၊အလ္ကိုင္ဒါ၊စင္တာႏႇနှင့်အခြားသူများကျွန်တော်တို့ကိုယခုမစောင့်ပါနဲ့။ အဖြစ်အသွင်ဖြင့်အာရေဗျပင်လယ်ကွေ့:အစအဦးမှအကွေ့အ အယ်-အာရပ်ဖို့အများ ၊ခန့်မှန်းခြေအကွာအဝေးကီလိုမီတာအသီး၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အတူအောက်ခြေသဲများ၊ရေတိမ်(မနက်)အဘယ်မှာရှိ အမြင့်ဆုံးအတိမ်အနက်ကိုခန့်မှန်းမီတာသာကွေ့အာရပ်ရေပူအလွန်ခိုင်ခံ့သောရေ၊အတွင်းရေစီးရေဖုံးလွှမ်းျကျး၏။ အကောင်းဆုံးရပ်ငုပ်ဖို့အတွက်ပင်လယ်ကွေ့အာရပ်ဒေသနှင့်နီးစပ်အမာမ္၏မြို့ ဒီဒေသတစ်မူထူးခြားတဲ့ဂေဟစနစ်၏ပုံစံပေါ်တွင်တစ်ဦးအုပ်စုတစ်စု၏ကျွန်းစုများ၏သန္တာကျောက်တန်း၊သန္တာစဉ်းစားရန်ဤနက်နဲသောအမှိုင်။ ဆက်လက်အားဖြင့်သင့်ရဲ့လှန်လှောကြည့်ရှုဒီဆိုက်တွင်၊သင်သဘောတူဖို့ကွတ်ကီးများအသုံးပြုခြင်းကိုစ္သက္ရာအကြောင်းအရာနှင့်ကြော်ငြာများကို၊ပေးလူမှုမီဒီယာအင်္ဂါရပ်၊အစိတ်ဖြာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွားအလာအားဖြင့်အသုံးပြုဂူကဲ့သို့ဖြာနှင့် ။
လျှင်သင်လေ့ရှိသောစကားပြောသူ၏တူညီသောမျိုးနွယ်အဖြစ်၊ရပ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအချို့သောအာရပ်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးစေခြင်းငှါ၊ဖမ်းသင်ပယ်စောင့်သောကြောင့်တွက်အချို့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်သိမပြုစေခြင်းငှါအများကြီးနှင့်ပတ်သက်။ လားလို့မရမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်တွေ့ဆုံရန်၊ဒါမှမဟုတ်လို့မရဖြစ်နိုင်သည်အရက်စွဲသူတစ်ဦးအနေနဲ့ဗျ၊သင်အကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုသူတို့၏ယဉ်ကျေးမှု။ ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့စကားပြောနှင့်အတူအရပ်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ကဲ့သို့တူညီသောစကားပြောနှင့်အတူအခြားလူများနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်နည်းနည်းခက်ပါတယ်လျှင်သင်မျှဝေမတူညီသောဘာသာစကား။ ရှိပါတယ်အချို့ဘာသာပြန်ဖြစ်ကြောင်းဆိုဒ်များရရှိနိုင်သောအွန်လိုင်းသင်ကူညီနိုငျသောပြောချင်ပါတယ်အဘယျသို့ပြောသည့်အခါသင်အကျင့်ကိုကျင့်သောအခမဲ့အီဗီဒီယိုစကားပြော၊ဒါပေမဲ့ဒီအစဉ်အမြဲကြောင်းအာမခံချက်၏အဓိကအတွေးဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်ကတည်းကအချို့ဘာသာပြန်များအစဉ်အမြဲမမှား။
လူကိုခရီးဦးကြိုနိုင်လျင်မြန်စွာဖြစ်လာ တစ်ဦးအသက်တာ၏။ အဘယျသို့တဦးတည်းအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့မိမိအသက်တာအတွက်၊ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသုံးစွဲဖို့ကောင်းတစ်ဦးအချိန်တစ်ညနေ၊သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အမျိုးအစားဆက်ဆံရေး။ ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအနည်းငယ်လမ်းညွှန်ဖို့ဘယ်မှာသိရန်သည်လူကိုခရီးဦးကြို။ ဒီနေရာမှာနေရာအများကြီးလိုလူတွေသှားဖို့ကယ္ခက္ခဲပြီးနောက်တစ်ခက်သောနေ့ရက်သည်၊ဒါမှမဟုတ်အကောင်းညဦးယံအပြင်ဘက် သူ။ ထို့ကြောင့်၊အဆိုပါအရက်ဆိုင်များဖြစ်လာနေရာအရပ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်၊သို့မဟုတ်ပင်။ သို့သော်ထိုသို့ယူအချိန်အများဆုံးအကြောင်းအပေါ်မှီခိုတ-ည-အတိုကောက်။ အဘယ်ကြောင့်။ အဖြစ်အရက်ကိုရေလိုစီးဆင်းနှင့်အလေ့အပြောင်းအမြင်ရှိကြောင်းအခြား၊ဒါပေမယ့်လည်းအ é။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊ကျွန်တော်တို့ကိုပါစို့ကြဉ်၏၊ဤအစည်းအဝေးနေရာများလွယ်ကူသည်အဘယ်မှာရှိနက်ဖြန်မကြာခဏစိတ်ပျက်။ အတွင်းခုန်အရက်ဆိုင်များ၊နိုက်မရှိသံသယအစည်းအဝေးနေရာ။ ကျနော်တို့ကခုန်နှင့်အတူအမည်မသိ(င)့၊အချိုရည်၊လေထုအနွိနှင့်အကောင်းမြင်။ အဘယ်သို့ကျက်သရေအများဆုံးခံနိုင်ရည်။ ထိုအခါမူကားနောက်တဖန်အ၊ဒါကြောင့်ခက်ခဲသည်ထက်ကျော်လွန်သွားကြဖို့တစ်ညသောကြောင့်၊နောက်ဆုံးမှာကြောင့်မကြာခဏအတွေ့အလိုလိုနက်ဖြန်နေ့ဘက်မှာအမည်မသိများသောခဲအောက်မေ့။ အဘို့ရှာကြသည်လျှင်အစည်းအဝေးတစ်ညနေ၊အင်တာနက်ကသံသယမပါဘဲကိုရှာဖွေဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှု။ အရာအားလုံးကြောင့်ဖြစ်တယ်။ တစ်ချက်တင်နှင့်အတူစိမ်း၊အစာအပေါ်တစ်ဦးဖိုရမ်သို့မဟုတ်ပင်အမည္၏အဆုံးမှာ ဆိုက်၏အစည်းအဝေးနှင့်အလုပ်အတွက်တူညီသောညဦးယံ။ လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ရိုးရှင်းစွာအကိုမေ့လျော့ခြင်းငှါမဖြစ်ဖို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ရန်အပေါ်အဘယ်သို့သင့်အဘို့အရှာဖွေနေနှင့်လည်းအများကြီးထုပ်ပိုးဖို့ရှေ့တော်၌အစည်းအဝေးကရှောင်ရှားဖို့ဆိုစိတ်ပျက်။ ဒါပေမယ့်အင်တာနက်လည်းအကူအညီသင်ရှာတွေ့ရှားပါးပုလဲ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရိပ်အမြွက်၏သည်းခံခြင်းကိုနှင့်အတူဖြန်းအနည်းငယ်ကံကောင်းခြင်းနှင့်ရိုးသားမှု၏နှစ်ဦးနှစ်ဖက်။ အဘို့အချိန်းတွေ့အလေးအနက်၊ပိုနှစ်သက်တဲ့ဆိုက်လေးအနက်နှင့်ညွှန်ကြားဆီသို့ဦးတည်အစည်းအဝေးပေးနိုင်ရန်အတွက်သင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်အခွင့်အလမ်း။ ဘာပိုကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထက်အရပ်တဦးတည်းအများဆုံးသုံးစွဲမိမိနေ့၏မေတ္တာကိုရှာတွေ့မှ။ အလှည့်အစား၊အရောင်းစက်၊အကော်ဖီသို့မဟုတ်ထောင့်ဆေး၊အဖြစ်အများအပြားရှိရာနေရာများကျွန်တော်ဖုံးကွယ်ထားနိုင်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်ကို။ အားသာချက်၏ဤအသင်၏အချိန်ယူ(မလွန်လွန်းသင်တို့အဘို့အမပျောက်မပျက်ရန်)သိရန်လူတစ်ဦးအကြောင်းကိုပိုမိုနှင့်အထာင္ဘက္ႏ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်၊သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်တတ်နိုင်ဖို့အတွက်ညည်းသံပြိုင်အပေါ်သင့်ရဲ့သူဌေး၊မှလွဲလျှင် သူသည်အမင်္ဂလာရှိ၏။ အပြင်လူကိုခရီးဦးကြိုအလုပ်ခွင်ထဲမှာမကြာခဏဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတစ်ဦးဆက်ဆံရေးဝှက်ထားပြီးတော့စပ်။ သင်တစ်ဦးတည်းသောမိဘချင်ပါတယ်၊တစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြု၊သင်မူကား၊ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမိနစ်မှသင်တို့အဘို့အစည်းအဝေး။ သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ယူအပေါ်အကြောင်းလူအမြင်နှင့်အတူနေ့တိုင်း။။။။။ စာရင်းအင်း၊အကယ်စင်စစ်တစ်ဦးတည်းအတွက်အများကြီး။ ဒါဟာအလုံအလောက်ဖွင့်ဖို့။ ထို့အပြင်၊သင့်ရဲ့ကလေးတွေအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆွေးနွေးကြောင်းတွေ့ရှိဖို့စတင်စကားပြောခန်း၊သို့မဟုတ်၏အဆုံးနှစ်ပြသဖွယ်။ မနိုင်သို့မဟုတ်မထွက်ယောက်မကြိုက်ဘူးအလွန်အကျွံလူအစုအဝေး၊သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကလေးများနှင့်အဘယ်သူကမှသင့်အလုပ်မှာ။ ဒါကြောင့်အဖြေတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကိုဖြည့်ဆည်းမိတ်ဆွေ၏မိတ်ဆွေ(င)။ သေချာပေါက်ရှိပါတယ်အများကြီးတော်မူသောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသင်နိုင်အောင်အသေးစား၏အဆုံး၊သို့မဟုတ်တောင်မှပိုပြီး။ အားသာချက်၏ဤအသင်အနည်းဆုံးများအတွက်အသိပညာသုံး။ ပြီးတော့မိတ်ဆွေ၏မိတ်ဆွေ(င)နိုင် အပြည့်အဝအရည်အသွေးကြသည်မဟုတ်ကြောင်း။ ဒါကြောင့်အတူ၊ဤသူအပေါင်းတို့သည်အတွေးအခေါ်များနေရာမှတစ်စုံတစ်ဦးကခရီးဦးကြိုပြုသင်လျော့နည်းဖြုန်းတယောက်တည်းညနေခင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဉအ။ သောကြောင့်တစ်ညကိုနှစ်ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုကောင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုအကြောင်းမေ့လျော့လေ့၊ငါတင်ထားအရာအားလုံးအတွက်အရေးအသားနှင့်ငါမြော်လင့်ခြင်းအကြောင်းကြိုတင်။ သား၊ငါကြိုးစားမှအချိန်ပိုမိုယူပါဖြစ် အဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှအားလုံးအတွက်အခြေအနေ၊နှင့်လည်းသွားသို့ဦးတည်ပိုပြီးစုံဖြည့်စွတ်၊နှင့်လည်းသိဖို့ဘယ်လိုမျှမပြောသောသူတို့အားပူဇော်ၽြန္ုပ္မ်ား၊အရာငါလိုဖြစ်ဖို့။။။။။ မင်္ဂလာပါအားလုံးမှငါ၏လူအဘို့အလုပ်ဖို့ငါ့အသက်ကိုသည္ဂျက်လေယာဉ်မှတ်ကလေးများသည်ငါဖြစ်တရုတ်နှင့်သင်၊ကျွန်မအလုပ်ချင်ပါတယ်အနည်းငယ်သက်သေ။ ကျွန်တော်တွေ့အဟောင်းတစ်ညအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ ငါအသွားအလုပ်လုပ်ဖို့။ ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေသောမျက်နှာ၊နှင့်စတင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပါ။ ရမ်းချစ်စရာကြီးကမနာ။ ဒါကြောင့်သူ့ကိုခဲ့သည် အဖြစ်ချဉ်းကပ်မှုအလွန်ခဲယဉ်း အမည်မသိ။ ကိုယ့်စကားအနည်းငယ်ဝေမျှဖို့သင်တို့နှင့်အတူငါ့အတွေ့အကြုံ။ ဒါကြောင့်မှန်သည်ဆိုတဲ့အကွက်ထဲတွင်အကလွယ်ကူစေသည်။ ငါအချိန်အကွက်ထဲတွင်နှင့်အမြဲတမ်းအပျော်အပါးကလွဲရင်ဘာအတွေ့ဆုံအတွက်ရယ်အကွက်၊ကြာရှည်ဘယ်တော့မှမ။
ကျနော်တို့ျဖင့္ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ သင်တွေ့လိမ့်မည်အဘယ်သူသည်များစွာသောလူအဘို့အရှာကြသည်အသစ်အသက်လမ်းဖြစ်၏။ ဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးမြို့၊ထဲတွင်အဘယ်သူမျှမဖက်ရှင်ရှိုးပဲရစ်တွင်တက်လက်မှတ်ထိုးနှင့်အတူအကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များနှင့်အစဉ်အမြဲ။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသာမှန်တကယ်ပရိုဖိုင်း။ ကျနော်တို့ကျော်ရှိသည် ၃၀၊၀၀၀၊၀၀၀။ ထောင်သောင်းချီကို၊ လူတွေကအဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဂိမ်း၊စမ်းသပ်မှုများ၊ဒိုင်ယာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊နှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာလွယ်ကူသောကြည့်ရှုရန်၊ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသေချာစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူမက်ဆေ့ခ်ျများလွန်အလေးအနက်။ ဒီအထဲကစစ်ဆေးလုံးဝအခမဲ့ Keto။ ရှိကော်ဖီဆိုင်ဧရိယာအတွင်းပါဘူး။ ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခက်ခဲကြောင့်သင်တွေ့ဆုံသည့်အခါရှိသည်သောသူကလူဘုံအကျိုးစီးပွားအတွက်လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူအဘယ်သူသည်ကူညီပေးနိုင်သည်။ မကြိုးစားရှာစာပေးစာယူနှင့်အတူအမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးလုပ်သူအမျိုးသမီးရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ။ မေတ္တာသည်အနီးမှာရှိသင့်နေအိမ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာ၏။ နေထိုင်သူပြည်သူများအတွက်အရည်အသွေးမြင့်မားပရိုဖိုင်းကနေကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ထက်လည်းပို ၂၀၀ အနိုင်ငံများ၊ရုရှား၊CIS။ လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဟာအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ဟုခေါ်သည်။ အတူနောက်လူမှတစျနေ့က၊နက်ဖြန်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည် ပိုကောင်းတဲ့။ ကြည့်ရှုရှာဖွေရေးပုံစံကို:အမျိုးသားအမျိုးသမီးလေး:အမျိုးသမီးအထီးထီးထီး:-:-မော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ
အာရပ်ယောက်ျားတွေလိုပဲအခြားယောက်ျားတွေ။ ဒါကြောင့်ပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပျက်အကြောင်းသင်ပြောပြနိုင်အလွန်ကိုအလွယ်တကူအခါအရပ်လေးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကြောင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်။ အာရပ်ယောက်ျားတွေမှာအကောင်းမဟုတ် ။ သူတို့ကမပေးခဲ့ကြဖို့သင်ပေးဝူး၊ဒါပေမယ့်ရိုးရိုးလက်ထပ်ဖို့မိန်းကလေးတစ်ဦးအကြောင်း။ လျှင်အရပ်လေးသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးမရပ်မမျှော်လင့်ကြောင်းသူကချင်ပါလိမ့်မယ်၊သင်သည်အစဉ်အမြဲ။ အများစုမှာအာရပ်အမျိုးသားများလက်ထပ်အရပ်။ ကိုယ့်ခံစားချက်ကိုအကြောင်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးမသွားပါစေပါဘူးအမှုအရာလည်းဝေးမသွားချင်ဘူးဖြစ်ထိခိုက်နာကျင်။ မူပိုင်ခွင့်ဟိုစာမျက်နှာ ။ နှင့်သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်။ အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်ကုမ္ပဏီအမည်များကိုပြသစေခြင်းငှါ၊ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဟာသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပိုင်ရှင်။ ဟိုစာမျက်နှာအဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အချာကျြနှာ၊။ ဟိုစာမျက်နှာနှင့် (စာရေးဆရာ)မေဝင်ငွေဝင်ငွေပေါ်မှာဒီစာမျက်နှာ အပေါ်အခြေခံပြီးတွဲဖက်ဆက်ဆံရေးနှင့်ကြော်ငြာများနှင့်အတူမိတ်ဖက်အပါအဝင်အမေဇုံ၊ဂူ၊နှင့်အခြားသူများ။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဖြစ်အယ္ငယ္န္၊သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်အပေါ်အနည်းငယ်အမှုအရာ။ ပေးတဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ပိုကောင်းအတွေ့အကြုံ၊အတွဲအသက်တာကိုအသုံးပြုသည်ကြတ္ကီး(နှင့်အခြားအလားတူနည်းပညာ)နှင့်စုဆောင်းစေခြင်းငှါ၊၊နှင့်မျှဝေပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်။ ယခုရွေးချယ်သောဒေသများ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုသဘောတူခွင့်ပြုချက်ကိုမှကျွန်ုပ်တို့၏။
အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအာသီးသန့်မူပိုင်ခွင့်များအတွက်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူ၊၊သင်ရှိသည်လိမ့်မည်တွေ့ဆုံရန်အခွင့်အမျိုးသားသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးရှိသည်သောသူအပေါင်းတို့သည်စံ၏။ သင်ဆန္ဒရှိလျှင်လက်ထပ်ဖို့မှကျေးဇူးတင်စကား၊"သုတေသန"သင်ရပြန်သွယ်အတွက်သီးသန့်နှင့်အတူအမျိုးသမီးများလိုသူအဖို့လက်ထပ်။ ထောင်အများအပြား၏အဖွဲ့ဝင်အကြီးဆုံးအွန်လိုင်း။ ၏အားသာချက်ယူဤလူမှုအကျိုးစီးပွားသင်တို့အဘို့အသင့်ရဲ့မိတ်ဖက်တွေ့။ ယူသင့်ရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်လက်သင်ဆန္ဒရှိလျှင်အလုပ်အကျွမ်းများ၏အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့ဝင်များ။ မှတ်ပုံတင်ပြီးပျော်မွေ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားချက်တင်ကဲ့သို့အာတူကမ်၊ပြည်တွင်းရေးစာတိုပေးပို့၊သို့မဟုတ်ပင်အသွင်။
ကျနော်တို့ကတိပေးျဖင့္ညီတဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များသင်တို့အဘို့အပင်ပန်းထည့်သွင်းစဉ်းစား။ စောင့်ကြည့်နေတာပါလျှင်သင်အသစ်တစ်ခုကိုအိမ်နှင့်အလုပ်အကိုင်၊သင်သည်လက်ျာအရပ်မှလာမယ့်။ အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကအချိန်ဖြုန်းနှင့်အတူအခြားလူများနှင့်ဖန်တီးခြင်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝ၊သင့်ဆက်သွယ်သင့်ရဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်ဒေသခံလူမှုအသိုင်း။ သင့်ရဲ့ချစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုမြန်။ တက်လက်မှတ်ထိုးဘို့အကောင်းဆုံးချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များအစဉ်အဆက်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသင့်ရဲ့ဧရိယာသို့မဟုတ်ကမ္ဘာအနှံ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထွက်စစ်ဆေးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များအတွက်စစ်မှန်သောပရိုဖိုင်းသာ။ ကျွန်တော်တို့ထက်ပို ၃၀၊၀၀၀၊၀၀၀ ပရိုဖိုင်း။ ျဖင့္ လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏အဆက်မပြတ်အွန်လိုင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏မေတ္တာရှင်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာ၊ဂိမ်း၊စမ်းသပ်မှုများ၊ဒိုင်ယာ၊ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊နှင့်မိုဘိုင်းဗားရှင်းများချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်စမတ်ဖုန်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များများမှာလွယ်ကူသောကြည့်ရှုရန်၊ပြည်တွင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း။ ငါတို့ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအလက်တွေရဲ့လုံခြုံရေးသေချာစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးယူမက်ဆေ့ခ်ျများလွန်အလေးအနက်။ ဒီအထဲကစစ်ဆေးလုံးဝအခမဲ့ Keto။ ရှိကော်ဖီဆိုင်အတွက်ဧရိယာ။ ဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းသိမှရရန်အသီးအသီးအခြားနှင့်အလုပ်ထွက်ဘုံအကျိုးစီးပွားနှင့်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အတွက်။ လျှင်သင်အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံး၊ဤအရပ်ဖြစ်ပါသည်။ မေတ္တာသည်အိမ်သို့နီးစပ်သူနှင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းသင်။ လူနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့်မားပရိုဖိုင်းကနေကျွန်ုပ်တို့ချိန်းတွေ့ဒေတာဘေ့စအသက်ရှင် ၂၀၀ ကမ္ဘာအနှံ့နိုင်ငံအပါအဝင်၊ရုရှားနှင့်အ CIS နိုင်ငံများ။ လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဟာအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်ဟုခေါ်သည်။ အတူနောက်လူမှတစျနေ့က၊နက်ဖြန်နေ့ဖြစ်လိမ့်မည်ပိုကောင်း။ ကြည့်ရှုရှာဖွေရေးပုံစံကို:အမျိုးသားအမျိုးသမီး င့္ကေ:အမျိုးသမီးအထီးထီးထီး:-:-မော်စကိုတွင်၊ရုရှားနိုင်ငံ။
အဘို့အချိန်းတွေ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများဦးဆောင်ခဲ့ပြီးများစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်သားသမီးရဲ့အင်တာနက်၏အနိမ့်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရန်ဖန်တီးရန်လိုအပ်ကြောင်းအဘို့အခိုင်မိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ စေရအနိမ့်-အလယ်တစ်ဝက်အပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်စစ်မှန်သောႏွင့္၊အဘယ်သူသည်ပြည့်စုံဆက်ဆံရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်တိုးမြှင့်။ ဒီဆိုက်တာဝန်ခံအခမဲ့ထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်လူတစ်ဦးချင်းစီမှအကဲဖြတ်လိုက်ဖက်။ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးများအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ Bas-ကြန္ဂိုအလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသူတို့ပူဇော်သက္ကာကိုဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့။ Pavel။ ၅၀ အသက်အနှစ်။ OLKAS လိမ့်မည်ဟုတစ်ရွှင်လန်းသောရိုးရာဟာသက။ အသက်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးသောမိန်းမသိရန်လိုသည်၊နှင့်လည်းခဲအလှန်။။။။။ Childlessness- အတား။ ဤသည်မုန့်။ ဖြစ်နိုင်ရင်:စိတ်ချယုံကြည်နှင့်အကျွမ်းနှင့်အတူအမြင့်မားဒီဂရီ။ မင်္ဂလာပါ။ ငါသည်လည်းတွေ့ဆုံကောင်းတစ်ဦးစုံတွဲ(အမျိုးသမီး ၃၅-၃၇ အသက်အနှစ်)။ ငါတို့သည်လည်း ၅ နှစ်၏သဟဇာတ။ အစီအစဉ်။ ဤသည်ဖြစ်စေအငွေ့၊မကောင်းတဲ့အလေ့အကျင့်၊intellectually ဖွံ့ဖြိုးပြီး၊သို့မဟုတ်လူငယ်တစ်ဦးလူတစ်ဦးနှင့်အတူအဆင့်မြင့်ပညာရေး။ အပေါင်းတို့နှင့်အတူနောက်ဆက်တွဲလိုအပ်သောစာပေးစာယူ။ ငါသည်လည်းချင်ပါတယ်အယူခံအမျိုးသားများအတွက်၊မကောင်းတဲ့အလေ့အထများ၊လေပိုကောင်းလေယခင်စစ်ရေးပုဂ္ဂိုလ်များ၊နှင့်မိသားစု။ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မဟာသာမန်လူတစ်ဦးနှင့်အတူပုံမှန်လိုအပ်ချက်နဲ့အလိုဆန္ဒ။ ငါအတူအချိန်ဖြုန်း။ Polovinka တဲ့ဗီဒီယိုချက်တင်ပဲခူးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများစွမ်းရည်နှင့်အတူအကြောင်းရေးသားလိုက်ဖက်မှုကိစ္စရပ်၊ဘာသာရပ်တတ်ပြီးသိလာအောင်အသီးအသီးအခြားရရှိမှု၊ဘုံအကျိုးစီးပွား။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်း။ အားလုံးချိန်းတွေ့နေကြတယ်လုံးဝအခမဲ့။
ကျနော်တို့၏ကြီးမားသောအရေခေတ်သစ်အာမိန်းကလေးများ'အမည်များသည်သင်နှင့်အတူ။ ကိုအာလေးမိန်းကလေးအမည်သင့်အဓိပ္ပါယ်။ နာမကိုအမှီ၏မြတ္စ၏ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းအရာအားဖြင့်မျှသာအကြောင်းပြောရင်၊နားထောင်နားလည်တဲ့လူတစ်ယောက်တော့၊ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကွီးအထားပေါ်ကြီးစွာသောအလေးပေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကောင်းသောသဘောလေးအမည်များ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာဘေ့စခဲ့လိုက်နာမျိုးမျိုးသောသုံးပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရပ်ကွက်၊သို့သော်ကျနော်တို့ကမယူကြဘူးမည်သည့်တာဝန်များ၏စစ်မှန်မှု၏ဤအမည်များ။
ချိန်းတွေ့ထိုလူနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ကလေး၊မာဦးဆောင်သောများစွာသောအခြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အင်တာနက်။ အားဖြင့်ချိန်းတွေ့နှင့်သှေးဆောငျ၊အင်တာနက်ကိုလည်းဖန်တီးပေးများအတွက်လိုအပ် ခိုင်ခံ့သောမိသားစုအနာဂတ်။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊တွင် ၂၀၁၅၊၅၈၍ကွာရှင်းသို့မဟုတ်လက်ထပ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ကွာဟချက်ပါ။ မျှော်လင့်ကစားရန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ယခုအဟ။ ရအောင်လိတ်ရဲ့တွေ့န်ဆောင်မှုအပေါ်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်အများစုမှာဖွံ့ဖြိုးဆဲအတွက်အမှန်ထွက်ရှိပါတယ်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသင်မြင်သည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကယ်နှုတ်ဖို့အခမဲ့မည်သူမဆိုများအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်လိတ်၊ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုဆိုက်၏အပေးအခမဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ၊စည်းကမ်းအကြောင်းမရနိုငျ။ တိုင်းကျွမ်း၊ရှိသမျှအခြေအနေထူးခြားသည်။ ရေးဖို့အတွက်ဒီသင်တန်း"နှင့်"ဒီမှာအဘယ်သို့အဖြစ်။" အတွက်အောင်မြင်သောချိန်းတွေ့၊သင်သာလိုအပ်ပါတယ်။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများမထည့်သွင်းဌာနလက်တွေ့ကျတဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ထို့ကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမဟုတ်။ အဘယ်သူမျှမ"အ"သို့မဟုတ်"ယုတ်"နေရာသင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ။ အဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောအရာတစုံတခုတစ်ခုအဖြစ်"ကောင်းသော"သို့မဟုတ်"ဆိုးသော"စကားလုံး။ ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်ဖို့သင်၏ထူးခြားသော ပြည်ခိုင်ဖြိုးအပေါ်နေ့အခြေခံ၊နှင့်ကျွန်တော်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပေါ်မှီခိုအားထားသူမ၏ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူသည့်အခါ။ ဘာလာယခုသူမကိုက်ညီဘူး။ ထို့ကြောင့်အောင်မြင်သောရက်စွဲမအာမခံနှင့်အတူသတိထားပါချဉ်းကပ်မှု။ အားလုံးဒီတိတ်တဆိတ်ဖွင့်ထားဖို့ပျက်ကွက်။ ဟုတ်ကဲ့၊ငါသည်မသိရပါဘူး။ ဤသည်၏အနုပညာအမေရိကနှင့်အလူ။ သင်လိုအပ်မှထွက်သွားနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအတွက်အဘို့မည်သို့ပင်အကြောင်းပြချက်။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်၊အဆိုပါမိန်းကလေးကချစ်စရာတစ်ခုခုသဘော။ ဒါဟာပြီးသားတစ်ဝက်ပြု။ မဟန်စတိုးဆိုင်၌သင်မမြင်နိုင်ထိုကဲ့သို့သောကောင်းတံဆိပ်များအတွက်ထုတ်ကုန်သင်အထောက်အပံ့။ နေသောအမျိုးသမီးလည်းများ၏အကြောင်းရင်းဒီအရှက်၊လူရဲ့ကောင်း။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ဖို့အပေါ်မြင်။ ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့တောင်းဆိုချက်သို့မဟုတ်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီအစစ်အမှန်စိတ်ပညာအကြောင်းဖော်ပြလိုလူတွေ။ ဤသည်နောက်အဆင့်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်း။ အဘယ်သူမျှမ။ "စုဆောင်းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုထပ္မံမီးကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်အမျိုးသားများစိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါအတွက်၊စသည်တို့ကို။" သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအထိစောင့်ဖို့ရှိသည်မိန်းကလေးရဲ့သာဖုန္းနံပါတ္။ ဖုန္းေခၚမည္။ ဤသည်၏ အရာအားလုံးကိုပေးမှုရာအရပ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်အကြောင်း။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ချင်မှဖတ်။ အတိုချုပ်ထဲမှာ၊သင်သည်ငါထံသို့လာကြကြောင်းကိုသောကြောင့်၊ငါ၏အစေခံရန်ဆန္ဒရှိ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်လိုလျှင်၊ခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်ရေးဖို့။ မနှိပ်။ ပြင့်သောအောက်ပါဤအဓိပ္ပါယ်။ ထိုသို့မထင်ပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ကြည့်ရအောင်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကရှင်းလင်းရန်မိန်းကလေးများ၏အကြံအစည်။ မိန်းကလေးများမဟုတ်ကဗျာဆန်သို့မဟုတ်ရေ။ အမှန်တကယ်၊တိုင်းမိန်းကလေးလက်ထပ်ဖို့လိုလားနေတဲ့အချို့သောအရာ၊အလေး။ ငါသည်ယုံကြည်သောအားဖြင့်ဖြည့်စွက်ကို"စီးရီး"၊အဆိုပါရည်မှန်းချက်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ အောင်မြင်ရန်လိုအပ်သည်ကားအဘယ်သို့။ အခါပိုက်ဆံချေးကနေလူအတော်များများ၊သင်အမြဲလိုပြပွဲတွေအများကြီး၏အသိအကျွမ်း။ တစ်ဦးစကားပြောဆိုကြောင်းအကြုံ၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်၎င်းတို့၏နေအိမ်(နံရံ၊မာ္ေတာ္ကားမ်ား၊စသည်တို့ကို။)၊ နေချိန်တွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲအဘယ်သူမျှမနေပါစေမည်သို့စိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်ယခုတိုးမြှင့်စေမည်။ ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့မိန်းကလေးအသိဒီလူ၊သာ။ ထို့ကြောင့်၊အလုပ္အကိုင္အမြဲမရှင်းလင်းသော၊အစဉ်အမြဲမဖြစ်၊ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှအာရုံစိုက်အဆံထုံး(မျက်စိကို၊ပုံ၊အသံ)။ မိန်းမတို့အဘို့၊ဒီအဖြည့်စွက် ဆန့်ကျင်ဘက်များ၏ကိုက်ညီ၊ဒါပေမယ့်ငါနှင့်အတူသဘောတူဘုရားသခင်ရဲ့တားမြစ်။ နောက်ဆုံးနှင့်အောင်မြင်မှုအာမခံချက်။ တစ်ပျော်စရာရှိသည်။
အာရပ်မိန်းကလေးများအတွက်ထောင်ချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ရေးချင်ကြောင်းကိုသင်ကြည့်ရှုဖို့အဘို့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေး။ အာရပ်မိန်းကလေးများအဘို့အချိန်းတွေ့သစ္စာမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအဘို့ရှာကြသည်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးတည်ဆောက်နိုင်ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့လုပ်မှအရက်ဆိုင်များရှာဖို့အတို-သက်တမ်းရက်စွဲ။ သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်ရေရှည်နာ္။ အာရပ်မိန်းကလေးများအတွက်ထောင်ချင်သည်ကိုကြည့်ဖို့အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်ရေးသားသော သင်ကအလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်သင်၏ကိုယ်ရေး။ အာရပ်မိန်းကလေးများအဘို့အချိန်းတွေ့သစ္စာမေတ္တာနှင့်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအဘို့ရှာကြသည်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးတည်ဆောက်နိုင်ရေရှည်ဆက်ဆံရေး။ သူတို့လုပ်မှအရက်ဆိုင်များရှာဖို့အတို-သက်တမ်းရက်စွဲ။ သူတို့ကြိုက်တတ်တဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန်ရေရှည်နာ္။ အထွေထွေအတွက်၊၏သန်းပေါင်းများစွာအာရပ်မိန်းကလေးများအဘို့အရှာဖွေနေလူပျိုအမျိုးသားများအတွက်အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေး။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အရပ်လှပတဲ့မိန်းကလေးအတွက်မည်သည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ဖြစ်ခြင်းအားအာရပ်လူသည်ပျော်စရာမဟုတ်။ သင်အရေးယူရှာဖို့ယနေ့၏ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်။ သင်တွေ့ဆုံရန်နှင့်သင့်အနာဂတ်အာရပ်တို့သမီးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများအတွက်အခမဲ့။ အခမဲ့ရပ်တွေ့န်ဆောင်မှုသည်အဘယ်အရာကိုသင်လိုအပ်ဖန်တီးရန်တစ်ပရိုဖိုင်။ အခါသင်အဘို့အတက်လက်မှတ်ထိုးကိုယ္ေ၊သငျသညျစောင့်ဆိုင်းသင့်အထိအတည်ပြု။ သင့်ပရိုဖိုင်းကိုအတည်ပြုပြီးသည်ဆိုပါ၊ထို့နောက်သင်ဖို့စတင်နိုင်ပါသည်ရှာရပ်မိန္းကေလး။ နောက်တဖန်အ၊သင်ဆက်သွယ်နိုင်သည်န့်အသတ်အာရပ်အမျိုးသမီးအတွက်အားလုံးနှင့်ချိန်းတွေ့အအေဂျင်စီ။ ဤသည်လွယ်ကူသောရှာတွေ့ဖို့အာရပ်မိန်းကလေးများသင့်ဒေသခံဧရိယာ၌။ သင်သာရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သည်ရှာဖွေရေးသတ်မှတ်ချက်များအတွက်အသင့်ရဲ့မြို့သို့မဟုတ် ။ အာရပ်ဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့ဖို့ခွင့်ပြုရှာတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးအတွက်သင့်နိုင်ငံနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ အကယ္၍အာေ၊ထို့နောက်သင်တွေ့လိမ့်မည်တစ်ခုမှာအာရပ်အမျိုးသမီးအတွက်ဒီနိုင်ငံသို့မဟုတ်သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက်အခြားနိုင်ငံများ။ ကြီးမှမကန့်သတ်ရှိပါတယ်ရှာနှင့်ထိတွေ့နှင့်အတူမိန်းကလေးတိုင်းအတွက်ရပ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု။ ရှိပါတယ်အခမဲ့စာ္ဘြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များနှင့်အခပေးရပ်ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဝန်ဆောင်မှုကိုချိန်းတွေ့သင်ကြိုက်တတ်တဲ့? ဤသည်သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှု။ သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အာရပ်အမျိုးသမီးအင်တာနက်ပေါ်မှာအများပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအဖွဲ့ဝင်ကြေးမှာအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ပဲပေးဆောင်ချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်ကြောင်းကိုသင်လစဉ်ကုန်ကျစရိတ်၏အဖွဲ့ဝင်။ ရှိပါတယ်အချို့လူကြိုက်များအခမဲ့ချိန်းတွေ့သောဆိုဒ်များဖန်တီးခဲ့ကြထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆက်ဆံရေးကိုနှစ်စဉ်။ ပူးပေါင်းအခါသင်အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ၊သင်အကျော်ပြီးပြည့်စုံထိန်းချုပ်မှုများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာ။ သင်ရပ်တန့်နိုင်သည့်ဝန်ဆောင်မှုမှာမည်သည့်အချိန်။ မရှိကုန်ကျစရိတ်လည်းရှိ၏အသုံးပြုရန်အတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ တစ်ချိန်ကသင်တို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာလိုက်အတည်ပြုပါ၊သင်အပြန်အလှန်နှင့်အတူအလုံးအရပ်နှင့်ဦးခ်င္းအွန်လိုင်း။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှု ပျော်စရာနှင့်အဆင်ပြေ၊သငျသညျအတှေ့နိုငျသင်၏မေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းအတွက်အသင့်ရဲ့အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်။ ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်ရပ်မိန်းကလေးများမှာအွန်လိုင်းအခမဲ့စာ္ဘြားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ။ ဤသူအများစုဟာမိန်းကလေးများအတစ်ခုတည်းနှင့်ပွင့်လင်းဆက်ဆံရေးသည်။ နှင့်တွေ့ဆုံရန်အရပ်လှပတဲ့မိန်းကလေး၊သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှု။ အာရပ်အမျိုးသမီးတွေကနေရာတိုင်းမှာရှိကြပါတယ်၊ပင်သင်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းနှင့်အခြားနိုင်ငံများ။ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များဖြစ်ကြောင်းအလွန်ကြီးစွာသောအတွက်ကိရိယာတွေရရှိအောင်အရပ်မိန်းကလေးများအင်တာနက်ပေါ်မှာလွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ ရှိပါတယ်အချို့အာရပ်လူမျိုး၊လူအများစုနေထိုင်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဆာ္ဒီအာေရး၊လက္ဘႏြန္၊ဆူဒန္၊နှင့်အခြားသူများ။ သင်ဘာလိုအပ်တယ်ရှာတွေ့မှတစ်ဦးအာရပ်မိန်းမသည်တစ်ဦးအပေါ်။ သငျသညျအရေးအကြောင်းတစ်ခုခု။ ဒါဟာသင့်ပရိုဖိုင်း။ တကယ်တော့၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြော်ငြာချင်လြတ္လပ္တဲ့အရပ်တစ်ဦးတစ်။ သင်သည်လည်းထည့်မှဓါတ်ပုံများ၏ကိုယ္ေ။ ကံကောင်းပါစေ။ အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်တစ်ခုတည်းအီမင်းသမီးများအတွက်အခမဲ့မှာရပ်ချိန်းတွေ့ဝန်ဆောင်မှုလည်းဖတ်ချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံဥာဏ်ကြောင်းအာဆက်ဆံရေးနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားအဖြစ်အချစ်ဇာတ်လမ်း။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳရပ်တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုစကားပြောခန်း၊ဒီနေရာမှာသင်ပြုဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူဒေသခံရပ်စိမ်း။ ဘယ်မှာသင်တွေ့လိမ့်မည်ရပ်စိမ်းအားဖြင့်ကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ ကိုဝင်ရောက်စဉ်၊အရပ်စကားပြောခန်းသင်ချိတ်ဆက်ထားလိမ့်မည်အမည်မသိလူတစ်ဦးအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျပန်းကိုး။ ရှိမရှိအတွေ့အကြုံများစိမ်းဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူတစ်ခုတည်းယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှအာရပ်၊အခမဲ့စာ္ဘြားဖုအဖုချက်တင်၊အွန်လိုင်းရှိစိမ်းတွေ့ဆုံ၊ကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများမှအာရပ်၊မျက်နှာချင်းဆိုင်ချက်တင်နှင့်အတူပရောပနှင့်အာရပ်မိန်းကလေးများ။ ပေးစေခြင်းငှါအလိုအလျောက်စကားပြောအတွေ့အကြုံခွင့်အသုံးပြုသူများကစကားပြောမပါဘဲမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲမပါဘဲ။ ဤသည်အကောင်းဆုံးအခမဲ့စာ္ဘြား စကားပြောခန်း အခြားရွေးချယ်စရာ။ -စိမ်းဖစ္သျဖြည့်ဆည်း:ဗီဒီယိုစကားပြောနဲ့ကျပန်းတပါးအမျိုးသား၊၊လှပ်ကျပန်းစကားပြောစိမ်းတွေ့ဆုံရန်၊ချက်တင်လုပ်အမည်မသိသူငယ်ချင်းများအွန်လိုင်းချက်တင်အွန်လိုင်းကမ်နေ့စွဲနှင့်အတူစိမ်း-အွန်လိုင်းအမည်မသိစကားပြောခန်းအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။
ဒီစာရင်းကိုကူညီဖို့အာမိဘအမည်များအတွက်မွေးကင်းစကလေး။ အရေးကြီးဆုံးလုပ်ငန်းအပေးအမည်ကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သောမိဘများသည်များသောအားဖြင့် ။ နာမကိုအမှီလိမ့်မည်နှင့်အတူကလေး၏ကျန်တဆင့်သူတို့၏အသက်တာ။ သတိရပါ။ နာမည်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အတွက်မွေးနေ့-အသက်အဘို့အ။ အချို့လူများကအမည်များစွာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ လူအတော်များများယုံကြည်ကြောင်းပြောနှုတ်ဖန်တီးအနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်နှင့်စကားပြောအပြုသဘောကိုဖန်တီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ကို။ ယူပြီးအားဖြင့်ထိုနာမည်ကလေးတစ်ဦး၏အဘို့အနှစ်အကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လိမ့်မည်မိမိတို့အညီစရိုက်များကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်များအတွက်သူမ၏အမည်ကိုသောရှိမရှိ၊သင်၏မိခင်သို့မဟုတ်ဖခင်၏အသစ်တစ်ခုချစ်စရာကလေး၊ကျွန်မတို့စုဆောင်းကောက်ယူခဲ့ကြစာရင်းများခေတ်အာရဗီကလေးအမည်များနှင့်အတူသူတို့အနက်အဓိပ္ပာယ်။ အဲဒီနာမည်များမှာခေတ်အဖြစ်ထူးခြားတဲ့။ ၏အကြီးဆုံးစုဆောင်းတာ္ကလေးအမည်များနှင့်အတူ။ လျှင်သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်သို့မဟုတ်မျှော်လင့်ကလေးတော့ရွေးနိုင်ပါတယ်အမည်များ၊၏နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်လူကြိုက်များ၊ရှားပါးယောက်ျားလေးများနှင့်မိန်းကလေးများအမည်များ။ အစ္စလာမ်သည်ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဘာသာ၊ပါကစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊အာဖဂန်နစ္စ၊ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်အီရန်ရှိသည်ကြီးမားတဲ့လူဦးရေ၏။ အဲဒီကလေးအမည်စာရင်းများမှာ အက္ခရာ။ အချို့အမည်များကြာကြာဖန်တီးနိုင်မည်ပြောင်နေကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့။ နစ်ခ်အမည်များကိုအသုံးပြုနိုင်မှအတိုကောက်အရာရှိမည်။ ဒီချုပ်၏အမည်များနှင့်၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်တွေရေးသားပြုစုခဲ့သည်မျိုးမျိုးသောသတင်းရပ်ကွက်ထံမှ၊ဤအများအပြားတင်သွင်းနေကြသည်အားဖြင့်ဧည့်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တာဝန်ရှိကျင်းပခဲ့မရနိုင်ပါသူတို့ရဲ့စစ်မှန်။
၁။ တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်မြို့တော်၏အပြင်ဘက်မှပိတ်ပင်-Mansiysk၊အခြားဒေသခံများရုရှားနိုင်ငံအပါအဝင်သန်းမှတ်ပုံတင်ထားသည့်စစ်မှန်သောအသုံးပြုသူများ။ ၂။ "LovePlanet"အဆင်ပြေတဲ့စနစ်ဟာချိန်းတွေ့အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအပေါ်အသုံးပြုသူ၏ပရိုဖိုင်းကိုရွေးပါရန်များအပြားမြန်မာဘာသာ:နိုင်ငံအနေ၊အသက်အရွယ်၊ပြင်ပဒေတာ၊ဇာတ်ကောင်စရိုက်များ၊စသည်တို့ကို။ ၃။ စာရင်းဇယားအရသိရသည်၊အများစု LovePlanet အသုံးပြုသူများ၏ရွေးလူတစ်ဦးအတွက်ပိတ်ပင်-Mansiysk နှင့်အခြားမြို့။ Mansiysk နှင့်အခြားမြို့။ လွန်းကလူများစွာကိုဖန်တီးအိမ်အဖွဲ့အစည်း၏အစည်းအဝေးနေ့အဘို့။ သည်နိုင်ရန်အတွက် LovePlanet အတွက်ပိတ်ပင်-Mansiysk စေဖို့အသစ်အသိအကျွမ်းများ၊သင်တန်းသားများပထမဦးဆုံးဖြည့်စွက်မှတ်ပုံတင်ပုံစံ။ လက္ရွိစာမျက်နှာများအားလုံး၏အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်ပါသည်:ချက်တင်၊အဆင့်သတ်မှတ်ချက်၊သင်တန်းသားများ၊၊ကယ်စီစဉ်တဲ့အစည်းအဝေး။
သင်တစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်"စကားပြော"အွန်လိုင်းကမ်းလှမ်းသောသင်ဆက်သွယ်ဖို့လူအတော်များများအပါအဝင်၊မုချ၊သောတစျသင်တို့အဘို့အရှာနေဖြစ်ကြောင်း။ ကျွန်ုပ်တို့အသိုင်းအဝိုင်းကြီးထွားလာသည်နေ့တိုင်းအားလုံးအသက်အရွယ်နှင့်ဒေသအားလုံးကိုယ်စားပြုဖို့သင်ရွေးချယ်သတ်မှတ်ချက်များသင်၌စိတ်ဝင်စားကြမီသင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံလူတို့နှင့်အတူကြသည်မဟုတ်ကြောင်းစိတ်ပျက်စရာ၊အဘယ်သူမျှမစက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောအံ့သြဖွယ်များ:ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်ဖို့ရည်ရွယ်သည်အလေးအနက်၊လွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုမှု၊အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းရှာတွေ့မှအရပ်လူဆိုးစာရင်း။ တွန့်ဆုတ်ကြဘူးဆိုပြီးသင်ဖန်တီးနေတဲ့ပရိုဖိုင်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် အသုံးပြုသူများ၏သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကို:သငျသညျသာကောင်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းတဲ့တွေ့ဆုံ။ သင်သိခဲ့သောဗမာထဲတြင္၊"အန္တရာယ်"ဆိုရရန်အသုံးပြုသည်"ပွဲချင်းပြီးအခွင့်အလမ်း"။ အကြောင်းအဘို့အစောင့်ဆိုင်းသင်အဘို့အသွား။ တာ့ခ်အခွင့်အလမ်း။ ဆိုက်ဘ်များအပြားတစ်ဦးတစ်ယောက်ရှိသည်သောတူညီသောအလိုဆန္ဒ၊လိုသူများပြန်လည်ရှင်သန်ရန်သူတို့၏ငွီးငှေ့ဖှယျဘဝကိုနှင့်ဖြုန်း၏အချိန်လေးအာဏာဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်အပျော်အပါးဖြင့်အဆက်အသွယ်အပြတ်အတူစိတ်ဝင်စားဖို့လူများနှင့်ချိုသော။ အဘယ်သူမျှမအချိန်၊အဘယ်သူမျှမအခွင့်အလမ်းလည်းကြောက်တတ်လို၏"ပိုပြီး"အစဉ်အမြဲမလွယ်ကူဖို့လူတွေကိုတွေ့ဆုံရန်နှင့်လူမှုဘဝပြည့်စုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ခေတ်သစ်ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်၊အခြားနည်းလမ်းရှိပါတယ်အတွက်အချိန်မီနှင့်ထိရောက်သောအစည်းအဝေးများ၊ကဲ့သို့"စကားပြော"အွန်လိုင်း။ ဝက်ဘ်ဖြစ်လာတဲ့အစည်းအဝေးရာအရပ်ကဲ့သို့မည်သည့်အခြားခွင့်ပြုသည့်ပစ်မှတ်ထားလူအများ၏အဘယ်သူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ချင်တယ်နှင့်သူတစ်ခါတစ်ရံတွင်အဖြစ်ကြီးမှော်များ၊လျှင်မပိုဒီတော့ထက်ပို"ပြင်ပအဖြစ်မှန်"။ ကျနော်တို့လိမ့်မည် ကောင်းချင်တယ်"စကားပြော"။
မှတ်ပုံတင်အခုဆိုရင်အခမဲ့များအပေါ် Polova စရာမလိုပဲအစည်းအဝေး Pingdingshan။ ထည့်မည္ကြည့်ဖို့ဓာတ်ပုံ။ အသစ်အကျွမ်းကမ်းလှမ်းဖို့နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအပေါ်ဆိုက်၏ဤအရေအတွက်၊ကျေးဇူးတင်စကားကိုအကောင်းဆုံးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုများ၏အုပ်ချုပ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။ Polovinka ချိန်းတွေ့ဆိုက်နှင့်မှတ်ပုံတင်အခမဲ့၊ဓါတ်ပုံမပါဘဲ၊ဖုန်းနံပါတ်များနှင့်လုံခြုံရေးအရာဝတ္ထုမဟုတ်နိုင်နှင့်တွေ့ဆုံ။ သည်ရှိစကောင်းတစ်ဦးကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းဘယ်မှာရှိမိန်းကလေးငယ်များခေါ်နိုင်ပါတယ် Pingdingshan၊ချက်တင်၊အွန်လိုင်း၊အဘယ်အရာကိုရဲ့ဓာတ်ပုံ၊ဖုန်းနံပါတ်။ Polovnka ဆိုက် ၁၀၀ အခမဲ့(မွတ္ပံု)နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုအပေါ်ရရှိနိုင်သောဆိုက်၊နေ့တိုင်းရှိတယ်အသစ်အစည်းအဝေးနှင့်သင်တန်းသားများအနေဖြင့်အသိုက်အဝန်းအသိအကျွမ်း။ ယနေ့သင်သုံးနိုင်သည်"အကြိုက်ဆုံး"-ဤသည်၏ဖုန်းနံပါတ်မိန်းကလေးနဲ့ကောင်လေးအတွက်ဓာတ်ပုံခဲ့သောလည်းမည်။ မှတ်ပုံတင်ရန်ဒီမှာနှိပ်ပါ။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳဗီဒီယိုချိန်းတွေ့၊ချက်တင်ကစားတဲ့၊ကျပန်း။ သင်ရှိသည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆွေးနွေးမှုများ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးပျော်ရွှင်စရာအတွက်ပြင်သစ်နှင့်အတူမိန်းကလေးများအွန်လိုင်း၊သင်သည်လက်ျာရာအရပျမှာ။ ရပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့သင်ဆက်သွယ်လျင်အမြန်သူ၏ချက်တင်ရပ် ဖစ္သျလွယ်ကူတဲ့အသုံးပြုခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုသင်တပြင်လုံးကိုအကွာအဝေး၏ဆန္းသစ္တီသေချာစေရန်၊သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံအပေါ်အကောင်းနဲ့အပင်ပိုပြီးပျော်စရာ။ ဘူးပင်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်အပေါ်အအာဗီဒီယိုအစည်းအဝေးစတင်အခမဲ့အစမ်းကာလ၏အချက်တင်ကစားတဲ့:သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။မည်သည့်လူမျိုး၏ဟူသောနှင့်အတူစကားပြော၏အဘယ်ကြောင့်တွေ့ရှကျနော်တို့အတူချက်တင်ကစားတဲ့ဒါပေမဲ့ပိုကောင်းတဲ့။ သင်လိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအပေါ်ချက်တင်ကစားတဲ့ဒါပေမယ့်သင်ချိန်းတွေ့ကြသည်မဟုတ်ကြောင်း။ ရပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ကမ်းလှမ်းသည်တစ်ခုဗားရှင်းသစ်ကိုတောက်ပနှင့်သင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်နှင့်အတူအလွယ်တကူ။ ဖန်တီးျဖင့္ဆက္သြယ္မႈမ်ားႏွနာရီနှင့်အတူအသစ်ချင်သူလူများနှင့်အတူကစားရန်သင်အွန်လိုင်းပေါ်တစ် ဗီဒီယိုအမည်မသိနှင့်အယူ၏အားသာချက်သောအင်္ဂါလုပ်လျှောက်လွှာအပို ပျော်စရာနဲ့အသုံးပွုဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်အခြားမည်သည့်။ အားသာချက်ယူအားလုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူအခမဲ့အစမ်းကာလ၊အဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်၊နှင့်တွေ့ရှိအ မိန်းကလေးများ:သူတို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်နှင့်ဆွေးနွေးရန်။ သုံးဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အလွန်လွယ်ကူပါတယ်:အလှည့်တွင်သင့်ကင်မရာနဲ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်တစ်ဦးကိုကျပန်းမိန်းကလေး။ မပါဘူးဆိုရင်ယခုသင်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ"နောက်တစ်ခု"။ မေ့ရာသင်သည်အဘယ်သို့သိအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ရပ်ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့အ ဗီဒီယိုဆန်းသစ်သောဆက်သွယ်ဖို့သင်လျှပ်စစ်ပြက်မြန်နှုန်းနှင့်အတူလူသစ်စကားပြောဘဲကောင့်တစ်ခုဖန်တီးရန်။ ဆြးေႏြးနှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအနှိပ်အပြီး၏အားသာချက်ကြာအသစ်ရွေးချယ်မှုများသင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပြိုင်ဘက်ကင်း။
ဘယ်လိုနှာပေါ် နှင့် -ဘုတ်အရွံုး
Гӹц лӓктӓш осциллограф
ချက်တင်ကစားတဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ကန့်သတ်ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးများ အခမဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက် ကျပန်းဗီဒီယိုချိန်းတွေ့ ဆှဗီဒီယိုစကားပြောခန်းစုံတွဲများအဘို့ ဗီဒီယိုချက်တင်ကစားတဲ့ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိန်းကလေးငယ်များအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ချက်တင်ကစားတဲ့ဘာသာ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့မပါဘဲဗီဒီယို ချက်တင်ကစားတဲ့မှအွန်လိုင်းသင်သည်သင်၏ဖုန်းအခမဲ့